Ny faritra NYPD dia misy faritra manodidina ny tranon'ny UN noho ny 'fonosana mampiahiahy'
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Ny ekipan'ny baomba NYPD dia manarona ny faritra manodidina ny tranon'ny ONU noho ny 'fonosana mampiahiahy'
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Crime • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Turkey Breaking News • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny ekipan'ny baomba NYPD dia manarona ny faritra manodidina ny tranon'ny ONU noho ny 'fonosana mampiahiahy'
Ny faritra NYPD dia misy faritra manodidina ny tranon'ny UN noho ny 'fonosana mampiahiahy'.
Trano fonenana diplaomatika marobe any New York no misy ity trano ity, ao anatin'izany ny iraka sy ny kaonsily, ary koa misy hetsika ara-kolontsaina Tiorka.
Kitapo mampiahiahy hita teo alohan'ny Trano Tiorka any New York City.
Nisokatra ho an'ny besinimaro ihany i Turk Evi (Trano Tiorka) tamin'ny volana lasa teo.
Trano fonenana diplaomatika marobe any New York no misy ity trano ity.
Departemantan'ny polisy any New York (NYPD) ekipa baomba no nantsoina rehefa nahitana fonosana mampiahiahy eo alohan'ny Trano Tiorka any New York, akaikin'ny Firenena mikambanatranobe s.
Nantsoina teny an-toerana ny polisy tamin'ny ora antoandro teo.
NYPD ny ekipan'ny baomba dia nanadio ny faritra misy sakana roa manodidina ny trano, izay hita ao amin'ny First Avenue any Manhattan.
Nisokatra ho an'ny besinimaro ihany i Turk Evi (Trano Tiorka) tamin'ny volana lasa teo. Any amin'ny faritry ny masoivoho East Midtown mavesatra ao firenena Mikambana Plaza, efa an-dalam-panamboarana nandritra ny efa-taona.
Misy trano fonenana maromaro koa ao anatin'ilay trano.